सुनिल झाको सफलताको कथा « Osvevo
सुनिल झाको सफलताको कथा
Published On : 26 March, 2022 11:54 pm
प्रस्तुतीः कृष्ण ढुङ्गेल
विश्वमा यस्ता विषय तथा प्रमाणपत्रका लागि लिइने परीक्षाहरू पनि छन् जुन हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । अझ कतिकाको त हामीले नामसम्म नसुनेका पनि हुनसक्छौँ । जस्तो, सिस्को (CISCO-CCIE) ।
सिस्कोको प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षा विश्वभरि उपलब्ध सबैभन्दा गाह्रो परीक्षहरूमध्ये एक हो । सूचना तथा प्रविधिको राजधानी मानिने क्यालिफोर्नियामा अवस्थित सिस्को एउटा अमेरिकन बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले सूचना, प्रविधि र साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रविधिहरू उत्पादन गर्छ । साथै, उक्त प्रविधिलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति विभिन्न चरणको परीक्षा लिन्छ । त्यसै परीक्षाका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि गर्छ । यसै प्रणालीमा सञ्चालित “इन्टरनेट नेटवर्किङ” सम्बन्धी “सिस्को सर्टिफाइड इन्टरने नेटवर्किङ एक्सपर्ट”को प्रमाणपत्र पाउने पहिलो नेपाली हुन सुनिलकुमार झा ।
सिस्कोको प्रमाणपत्र पाउनुलाई इन्टरनेट नेटवर्किङ विषयमा पिएचडी गरेरबराबर मानिन्छ । नेपालको एउटा सानो गाउँबाट उठेर विश्वकै कठिक सिस्को परीक्षा पास गर्नु पक्कै सजिलो कुरा होइन । तर मिहिनेत र महत्वकांक्षा बृहत् भएपछि जुनसुकै उपलब्धी पनि सानो बन्छ । यो उपलब्धी हासिल गरेसँगै मिहिनेत र महत्वकांक्षाका पर्याय तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आइडल बनेको छन् सुनिलकुमार झा ।
सिस्को प्रणालीद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रमको सुरुको १३ वर्षमा अमेरिकाबाट ५ हजार १ सय १९ र भारतबाट ५ सय १२ जनाले यो प्रमाणपत्र पाएका छन् । सजिलैसँग उत्तिर्ण हुन नसकिने विश्वका १० गाह्रा विषयहरूमध्ये सिस्को प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षा पनि एक हो । यतिका कठिन परीक्षा सानो मिहिनेत र धैर्यले प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः छ । झाले पनि सानो परिश्रमले अर्जेका होइनन् यो उपल्बधी । पाँच वर्षसम्मको निरन्तर अध्ययन तथा अनुशन्धान, साथमा २ महिनासम्म दैनिक १२ घण्टा प्रयोगशालामा अभ्यास गरेपछि उनले पहिलो नेपाली इन्टरनेट नेटवर्किङ विज्ञको परिचय बनाउन सफल भएका हुन् ।
झा यस उपब्लधीलाई ईश्वरको वरदान मान्छन् । उनी भन्छन्, “अमेरिका जाँदै गर्दा यसै गर्छु भनेर गएको थिइनँ । म त सिभिल इन्जिनियर हुन गएको विद्यार्थी । हुने हार दैव नटार भनेझैँ म इन्टरनेट नेटवर्किङ विज्ञ बन्न पुगेँ । यो मलाई ईश्वरले हिँडाएको बाटो हो । मेरो उपलब्धी ईश्वरको वरदान हो ।“
म ठान्नेछु, तिमीले आफ्नो राम पायौ । आफ्नो कृष्ण पायौ । भगवान् पायौ ।
कवि काकासँगको यही वार्तालापबाट प्रेरित भए सुरु भयो बालक अर्थात् सुनिलकुमार झाको यात्रा । सर्लाही जिल्लाको सानोमात्र नभएर विकट गाउँबाट काठमाडौँका साँघुरा गल्लीहरूसम्म । काठमाडौँका साँघुरा गल्लीहरूबाट अमेरिकाका फराकिला सडकहरूसम्म । र, अमेरिकाका फराकिला सडकहरूलाई नै पाठशाला बनाई विश्वमै कठिन मानिने सिस्को परीक्षा उत्तिर्ण गर्ने पहिलो नेपाली इन्जिनियरसम्म ।
कवि काका अर्थात् कवि शडानन्द झा जसले सुनिलकुमारलाई ज्ञान विज्ञानका कुरामात्र सिकाएनन् । उनले रामायण र महाभारतको ज्ञान पनि दिए । कथाहरू सुनाए । तर उनी आँखा देख्दैन थिए । दृष्टिविहीन कवि काका संसारलाई अन्तर्दृष्टिले हेर्थे । उनको अन्तर्दृष्टिलाई सानैबाट स्पर्श गरेका बालक झा उनीप्रति ज्यादै समर्पित थिए ।
“मेरो बाल्यकाल सामान्य थियो । यद्यपि म अरूभन्दा जिज्ञासु स्वभावको भएकाले परिवारबाहिरका मानिसहरू पनि मलाई प्रेम गर्थे ।” सुनिकुमार झा भन्छन्, “मैले प्रारम्भिक शिक्षा अनौपचारिक रूपमा काका कवि शडानन्द झाबाट पाएको थिएँ । उहाँ आँखाले देख्न सक्नुहुन्न थियो । तर ज्ञानको सागर उहाँमा समाहित थियो । कतै काम पर्दा प्रायः मलाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो । र, बाटोमा रामायण, महाभारत तथा वेदपुराणका कुरालगायत विश्वका घटनाहरूबारे सिकाउनुहुन्थ्यो । उहाँमार्फत् नै मैले जीवनको उदेश्य तथा मार्गदर्शन पाएको हुँ ।”
कवि काका रामका ठूला भक्त थिए । उनलाई रामयण तथा महाभारतका सबै कुराहरू थाहा थिए । सुनिलकुमार झालाई लाग्छ, कविकाकाले उनको भविष्यको भविष्यवाणी गरिरहेका थिए । झा आफूले हासिल गरेको उपलब्धी आफ्नो मान्दैनन् । उनी भन्छन्, “मलाई थाहा थिएन, जबसम्म मान्छेलाई कुनै कुराको ज्ञान हुँदैन तब आत्मविश्वास पनि हुँदैन । रामायण, महाभारत, चाणक्यका नीतिहरूलगायत जुन जुन कुराको ज्ञान कवि काकाले दिनुभयो मैले त्यसैलाई पछ्याएँ । जब अमेरिकाका सडकहरूमा समयहरू बितिरहेका थिए तब दुखको वास्तविक रूप थाहा भयो । त्यस समय मलाई कवि काकाले दिएको ज्ञानले मद्दत गर्यो । ‘कसरी दुखको सामना गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, कसरी लक्ष्यमा पुग्ने ?’ भन्ने कुराहरूको ज्ञान भयो । तसर्थ मेरो यो सफलतामा कवि काकाले दिएको ज्ञानको ठूलो हिस्सा मिसिएको छ ।“
सर्लाही जिल्लाको सानो गाउँ सिमरामा जन्मिएका सुनिलकुमारका पिता नेपाल प्रहरीमा हवल्दार थिए । यसर्थ उनको जन्मिए परिवार खाँटी मध्यमवर्गीय परिवार थियो । मध्यमवर्गीय परिवारका अन्य बालकको झैँ उनको बाल्यकाल पनि समान्य थियो । यद्यपि उनी गाउँका अन्य केटाकेटीभन्दा फरक, जिज्ञासु स्वभावको भएकाले गाउँलेहरूले माया गर्थे ।
बरहथवामा आफूलाई पढाएका शिक्षक पदमबहादुर खड्काको सम्झना गर्दै झा भन्छन्, “बरथवाहको विद्यालको सुरूवात पदम सरहरूले नै गर्नुभएको थियो, घुम्ती विद्यलको रूपमा । चाहेको भए उहाँले कुनै व्यवसाय सुरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर विद्यालय सुरू गर्नुभयो । उहाँ मेरा लागि सेवाको प्रेरण हुनुहुन्छ । त्यसै विद्यालयबाट मैले कखरा सिकेँ । पदम सरबाटै कखरा सिकेर मैले उज्यालो भविष्य कोरेँ ।“
पढ्नका लागि बरहथवाबाट गोदइता जाँदा झालाई हात्तीबाट बिदाइ गरियो । संयोग कस्तो पर्यो भने, गाउँमै कार्यरत् थानेदार हरिनन्दन सिंह जागिरबाट बिदाइ लिएर हात्तीको सवारीमा गोदइता हुँदै घर फर्किदै रहेछन्, जो झाका बुबाको साथी थिए । उनले नै बुबालाई भनेर बालक झालाई हात्तीको सवारीमा पुर्याइदिए । झा भन्छन्, “मलाई थाहा थिएन, त्यस अविस्मरणी हात्तीको सवारी मेरो सफताको सुरूवात थियो । इश्वर मेरो यात्राको योजना तयार पारेर बस्नुभएको रहेछ ।“
झाका दाजु पहिल्यैबाट त्यही विद्यालयमा पढ्दै थिए । त्यसैकारणले आउजाउमा दाजु साथ हुने र पढाइमा राम्रो गर्ने मनसुवाले उनलाई पिताले त्यस स्कुलमा भर्ना गराइदिए । झाले त्यस विद्यालयमा ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्मको अध्ययन गरे ।
“गोदइता स्कुलको वातावरण मेरा लागि विशेष त थियो नै, अहिलेसम्म अविस्मरणीय पनि छ ।” झा भन्छन्, “त्यस विद्यालयको जस्तो माहोल अञ्चलभरिमा नै अन्त कतै थिएन । विद्यालयको वातावरण अनुशासित मात्र थिएन; सफा, राम्रो काइदाकानुन, प्रशस्त भवन तथा बगैँचा पनि थियो । बिहान सधैँ पीटी हुन्थ्यो । क्यान्टिनको राम्रो व्यवस्था भएको विद्यालयका भित्ताहरूमा प्रेरक भनाइहरू लेखिएका थिए । प्रेरक भनाइहरूमध्ये एक थियो – A long journey starts withasingle step । मलाई लाग्छ, गोदइताको जस्तो वातावरण पाएँ हामीकहाँ धेरै सुनिलकुमारहरू बन्नेछन् ।“
त्यसै विद्यालयबाट झाले एसएलसी पहिलो श्रेणीमा उर्तिण गरे । त्यसबेला पहिलो श्रेणीमा एसएलसी उर्तिण गनुभनेको गाउँका लागि सपनाबाहिरको कुरा थियो । पहिलो श्रेणीमा पास भएको खबर पत्रिकामा छापिएर आउँदा उनले पनि विश्वास गर्न सकेका थिएनन् ।
गोदइता विद्यालका प्रिन्सिपल मुनार यादव थियो । जसबाट झाले र उनका दाइले १० कक्षासम्मको ट्युसन कक्षा पनि पाए । उनी प्रिन्सिपल मुनार यादवको सम्झना गर्दै भन्छन्, “मेरा सपनाहरूको आयतन बढाएको गोदइताले हो । त्यसमा पनि गुरू मुनारका कारणले हो । विद्याल अब्बल र उदाहरणीय हुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका उहाँकै थियो । वास्तवमै भन्दा, मेरो सफलतामा उहाँको ठूलो देन छ ।“
झा कक्षा ९ मा पढ्दा मुनार सरले सुनाएको कथाको स्मरण गर्छन्, “tick the clock says tick tick tick; how much land doesaman need ? if money is lost nothing lost, health is lost something is lost but if character is lost everything lost. who will listen my grief ?”, र भन्छन्, “यी र यस्ता अनेकन् नैतिक शिक्षाहरू उहाँबाट मैले पाएको छु जुन अहिलेसम्म पनि मेरो मनमस्तिष्कमा बसेको छ । यिनै शिक्षाहरूले मलाई गलत काम गर्न त के, सोच्न पनि दिँदैनन् ।
पिताको सपना कमसेकम छोरोले एउटा राम्रो जागिर खाओस् भन्ने थियो । जागिरलाई नै केन्द्रमा राखेर सजिलो गरी काम पाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले एसएलसीपछि उनी ओभरसीरको अध्ययनमा लागेँ । त्यस समय ओभरसीर पढ्नु पनि जोकोहीको वशको कुरो थिएन । तर एसएलसीमा पहिलो श्रेणी हासिल गरेका हुनाले उनले सजिलैसँग भर्ना पाए ।
दुई वर्षको ओभरसीर कोर्स गरेपछि काठमाडौँमै उनले सानोतिनो जागिर सुरु गरेँ, जुन पिताको सपना थियो । तर सुनिलकुमारको सपना त्यतिमा मात्र सीमित थिए । सपना देख्न पनि फराकिलो भूगोलको आवश्यकता पर्दो रहेछ । साघुँरो काठमाडौँको फराकिलो भूगोलले उनको सपनालाई पनि बृहत बनाउँदै लगिरहेको थियो । सपनाले नै डोर्याएर उनलाई इन्जिनियरिङसँग जोडिदियो । त्यस समय उनी कम्प्युटरसँग नजिक भएँ ।
जब सुनिलकुमार बीईको अन्तिम वर्षमा पुगे, उनले “कम्प्युटर एडेट डिजाइन” लिएँ । त्यसैअन्तर्गत उनको समूहले “कुइक बेसिस ल्याङ्ग्वाइज”को सफ्टवेर डिजाइन गर्यौ । त्यस सफ्टवेयरको सफलताले उनमा कम्प्युटरप्रतिको लगाव बढाउन ठूलो मद्दत गर्यो ।
नेपालमा कम्प्युटरमा डुबिरहेको मान्छे, तर उनले अमेरिकामा पढ्नका लागि भने सिभिल इन्जिनियरिङमा एप्लाई गरे । खासमा, अमेरिका गएर उनी कम्प्युटरकै क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न चाहन्थे । तर उनलाई के र कसरी पढ्ने भन्ने कुराको कुनै ज्ञान थिएन । महत्वकांक्षाको सम्बन्ध ज्ञानसँग हुँदैन सायद । उनीभित्र कम्युटरको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्ने महत्वकांक्षा भने झन् झन् झाङ्गिदै गइरहेको थियो ।
उनले अमेरिकामा आफ्नो महत्वकांक्षामा बारेमा साथीहरूलाई बताए । के, कहाँ र कसरी पढ्न सकिन्छ भनेर सोधिखोजी गरेँ । चाहेपछि नहुने नै के रहेछ र ? अमेरिकाकै एक प्रतिष्ठित कम्युटर साइन्सको स्कुलमा भर्ना भए । र, त्यस स्कूलमा धेरै प्रोग्रामिङहरू गर्ने अवसर पाए ।
“सिभिल इन्जिनिय हुन अमेरिका पुगेका म, विस्तारै विस्तारै कम्प्युटरतिरै हराउन थालेँ ।”, विगतको रुमानी सम्झनामा रुमलिँदै झा भन्छन्, “मेरो लगाव त्यतातिरै सोझिदै गयो । त्यसैक्रममा मैले पहिलोपटक CISCO-CCIE कोर्सको बारेमा थाहा पाएँ । जसलाई अत्यन्तै अप्ठेरो कोर्सका रूपमा लिइँदो रहेछ । तर त्यस कोर्स पास गर्न सके नेटवर्किङ क्षेत्रमा माग अत्याधिक रहेछ ।”
आईटीको अन्य कोर्षहरूभन्दा यस कोर्षको माग बजारमा धेरै भएको र अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले उक्त उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको थाहा पाउनसाथ उनलाई जसरी पनि सीसीआईई गर्ने इच्छा जाग्यो । उनी भन्छन्, “मलाई लाग्यो, यदि यस विषयमा मैले प्रमाणपत्र हासिल गर्न सके भनेँ कवि काकाको ममाथिको योगदानमाथि मैले न्याय गर्नेछु । आफ्नो भगवान् पाउनेछु ।”
सोच्न त सोचे, तर उनलाई आफू सिस्कोको अध्ययन गर्न सक्ने कुरामा विश्वास थिएन । तर थाहा थियो, यात्राको सुरुवात पहिलो पाइलाले नै गर्छ । त्यसैले पहिलो पाइलास्वरुप किताबहरू पढ्न थालेँ ।
उनका लागि सिस्कोको अध्ययनका बारेमा अरुले भनेको सुन्दा तथा आफैँ बुझ्दा पनि पढ्न असम्भव प्रायः थियो । त्यस विषयमा विज्ञता हासिल गर्ने नेपाली त थिएनन् नै, अमेरिकामै पनि ज्यादै कम व्यक्तिहरूले मात्र पढ्ने साहस गर्थे । झा भन्छन्, “तर त्यस समय मलाई आदिकवि भानुभक्त आचार्यले सहयोग गरे । उहाँले परिचित गराउनुभएको घाँसीले उर्जा दिए ।”
सुनिलकुमारले कवि काकालाई सम्झिए । उनी भन्थे, “इमान्दारीपूर्वक चिताएको लक्ष्य पाउन निरन्तर परिश्रम गर्नुपर्छ । परिणामको जिम्मा ईश्वरमाथि छोडिदिनुपर्छ । काग र काइली दुबैको रङ कालो हुन्छ, तर मीठो बोल्ने प्रतिभाका कारण कोइली सबैको प्रिय छ । त्यसैले मिहिनेतले प्रतिभा हासिल गर । हेर त, म अन्धो छु । तर ज्ञानआर्जन गर्न मलाई अन्धोपनाले कहिल्यै रोकेको छैन । एकचोटि गाउँमा एक अमेरिकन आएको थियो रे । ऊ धनी छ कि गरिब ? त्यो कसैलाई थाहा थिएन, तर अमेरिकन भएकाले सबैे उसलाई सम्मान गर्थे । त्यसैले तिमी जहाँ गए पनि सिप सिक्न र ज्ञान आर्जन गर्न नछोड्नु । तिमीले राम्रो गरे सबैको नाम र इज्जत हुन्छ ।”
कवि काकालाई सम्झिनसाथ सुनिलमा जस्तोसुकै गाह्रो काम पनि गर्नसक्ने उर्जा थपियो । कवि काका र उनका कुराको झाको मानसपटलमा गहिरो छाप थियो । उनले कवि काकाले अमेरिकनको कुरा गरेकै समय “अमेरिका उडेर पुगौँ, र जमेरै पढौँ” भन्ने इच्छा जागेको थियो । तर चिताएकै भरमा अमेरिका पुग्नु सम्भव थिएन । झा भन्छन्, “परिवारबाट पाएको निरन्तर हौसला र शिक्षकहरूको आशीर्वादले मलाई मिहिनेत गर्न उत्प्रेरित गरिरह्यो । उहाँहरूकै प्रेरणा र हौसलाअनुसार मैले परिश्रम गर्दै गएँ । हरेक सिँढीहरू एक एक गरी पार गर्दै गएँ । र, ईश्वरको कृपाले मलाई यो लक्ष्यसम्म डोर्यायो ।”
मान्छेको जीवनै के छ र ? आज छौँ, भोलि नरहन पनि सक्छौँ । पर्सिपल्टदेखि हाम्रो अस्तित्व नै बिलाईजान्छ कतै । अस्तित्वमा केही रहन्छ भने त्यो नाम हो । सम्झनामा केही रहन्छ भने त्यो काम हो । जस्तो, आदिकवि भएर भानुभक्त सधैँ जीवित छन् । भानुभक्तको सृजनाका माध्यमबाट घाँसी कवि काकाझैँ बाँचिरहेछन् । र, उनले अठोट गरे, “म नरहँदा पनि मेरो नाम रहनुपर्छ । मेरो कामले नामलाई सधैँ जीवित राख्ने तागत राख्नुपर्छ ।”
झाले आफूलाई घाँसी बनाए । ठाने, कुनै भानुभक्त उनको कथा लेखेर बसेको छ । सोचे, त्यस कथालाई मैले मुकाम दिनुपर्छ । त्यसैले उनले निरन्तररुपमा प्रयास गरिरहे । अभ्यासलाई दैनिकी बनाए । र, कवि काकाले भनेझैँ भगवान् पाए । भगवानको कृपाले नेटवर्किङ् विषयमा पीएचडीबराबरको विज्ञाता हासिल गर्ने उनी पहिलो नेपाली बने ।
भनिन्छ, परिश्रम गर्नेको साथ परमात्माले पनि दिन्छन् । झा आफ्नो सफलताको श्रेय आफ्नो परिश्रमका साथै आफूलाई पढाउने गुरुहरू तथा परिवारलाई दिन्छन् ।
अमेरिका गइसकेपछि पनि सुरुको ५ वर्षसम्म सुनिलले बहुतै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । उनले काम गर्दै लगतार ५ वर्षसम्म अध्ययन गरे । कष्टकर थियो जीवन, तर उनीसँग लक्ष्यसम्म पुग्न अर्को विकल्प थिएन । आत्मनिर्भर भएर काम गर्न तथा पढ्न पनि उनलाई अमेरिकाले सिकायो । त्यसैले उनी अमेरिकाका सडकहरूलाई पाठशाला मान्छन् । आफ्नो मिहिनेत र ईश्वरको कृपाले आफ्नो जित भएको ठान्छन् ।
नेपालमा विज्ञको अभावमात्र होइन, सूचना प्रविधिको विकासको विषयमा सरकारको ध्यान अझै पनि पुगेको देखिदैन । नत्र सूचना प्रविधिजन्य शक्ति उत्पादन मात्र नभई हरेक दृष्टिकोणले विश्वशक्ति बन्ने प्रतिपस्र्धामा रहेको भारत र चीनको बिचमा अवस्थित नेपालले निकै लाभ लिन सक्छ । तर यसको लागि विभिन्न देशसँग सहकार्य तथा राजनीतिक अवरोधरहित वातावरण आवश्यक छ ।
“सूचना प्रविधिमा नेपाल भर्खर बामे सर्दैछ । व्यक्तिगत स्तरबाट यो प्रणाली स्थापना गर्न सकिने सम्भावना न्युन छ ।”, झा भन्छन्, “नेपाल सरकारको तर्फबाट नै ठोस योजनासहित आवश्यक बजेको व्यवस्था भए दक्षहरूको एउटा टोली नै गठन गरी गृहकार्य गर्ने हो भने यो (सिस्को प्रणाली) सम्भव छ । र, नेपालको लागि यो निक्कै फलदायी पनि हुनेछ ।”
विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर सपना देखे पनि कडा परिश्रम नगरी सफलता हात पार्न सकिँदैन । सही गन्तव्य रोजेर निरन्तर अभ्यास गर्नु एउटा मात्र बाटो हो । यो तथ्यको प्रमाण भएका छन् ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर नेपालकै पहिलो इन्टरनेट नेटवर्किङ विज्ञ बनेका सुनिलकुमार झा ।
निकट समयमा नै आफ्ना भोगाइ तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण विवरणसहित पुस्तक प्रकाशन गर्ने योजनामा छन् सुनिलकुमार । उनी भन्छन्, “किताबमार्फत् मेरो यात्राबारे थप प्रकाश पार्नुका साथै मेरो भावी योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नेछु ।”
डन कार्कीको म्युजिक भिडियो “कर्मको गति” सार्वजनिक
अमेरिकाको लसएन्जलस निवासी डन कार्कीले “कर्मको गति” नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जीवन
मृत्यु अझैँ मरेन ! (घाउ आँफैँलाई दुख्छ बाट )
मृत्यु अझैँ मरेन ! सबैले बुझेको अनि कसैले पनि अनुभूति नगरेको रहस्य हो मृत्यु ।
दियोको अन्तिम लप्का र शरद्का पहेँला पातहरू सार्वजनिक
दीपा राई पुनको कविता सङ्ग्रह ‘दियोको अन्तिम लप्का र शरद्का पहेँला पातहरु’ ३१ वैशाख २०७९
महान् मानिस ( घाउ आँफैँलाई दुख्छ बाट )
महान् मानिस चाहेरमात्र महान् बन्न सकिँदैन । महान् बन्ने सिद्धान्त र सूत्र आविष्कार पनि भएको